As wr wb kabajamtoota Hordoftoota Miidiyaa Nuuralhudaa, sagantaa fataawaa Nuuralhudaa kan amma dura Raadiyoo nuuralhudaa irratti isiniif dhiheeysaa turre, yeroo muraasaaf addaan kutuun keenya ni beekama. Hayyama Rabbii guddaatiin sagantaa kana daran fooyyessinee, haala adda taheen eegaluuf deemna. Hordoftoonni keenya kan biyyarraa nu hordoftan, hayyama Rabbii guddaatin guyyaa boruu salaata zurhii booda, sa’aa 8:30 – 9:30 (0902147777) irratti bilbiluudhaan gaafii keessan dhiheeyfachuu mirga qabdu. Hordoftoonni biyya alaa irraa nu hordoftan ammoo, gaafii keessan karaa whatsappiitiin +973 3545 1367 irratti nuuf ergaa.
Namoonni biyya keessaa bilbiltanii gaafii keessan dhiheeffattan, gaafii keessan sodaa tokko malee ifa godhaa gaafadhaa. Namni isin keessummeessu waan ifa hin tahin yoo isin gaafates ibsa gahaa kennuu hin irraanfatinaa.
Namoonni gaafii keessan karaa whatsappiitiin ergitan ammoo, gaafii keessan daqiiqaa 5 keessatti xumuruu qabdan. Yeroo tokkoon gaafii 3 qofa gaafachutu hayyamama. Gaafilee sadeen daqiiqaa 5 keessatti haala gaariin adda baafattanii gaafachuu mirga qabdu. Yoo gaafiin keessan dhedheeraa tahe ammoo, carraa duraa keessatti gaafii 1 qofa dhiheeysuun, gaafilee biroo carraa itti aanuuf dabarsaa.
Guyyaafi Sa’aan Gaafii itti keessummeessinu:
Namoota biyya keessaa gaafattaniif; Fulbaana 28, 2012 guyyaa Arba’aa (Roobii) Salaata Zuhrii booda sa’aa 8:30 – 9:30 qofa. Carraa hordoftoota biyya keessaa bal’isuuf jecha. Lakkofsa telefoonaa kallattiin itti bilbilamurratti telefoona biyyarraa bilbilamu qofa keessummeessina. Telefoona biyya alaa kan kallattiin bilbilamu yeroof kan hin keessummeessine tahuu kabajaan isin yaadachiisna.
Namoota biyya alaa irraa gaafii keessan karaa whatsapp tiin ergachuu barbaaddaniif ammoo: Guyyaa Arba’aa (Roobii) October 9, 2019. Salaata Zuhrii booda sa’aa 9:30 – 10:00 (3:30 PM – 4:00 PM) yeroo jiru keessatti gaafii keessan nuuf erguu mirga qabdu. Hordoftoonni keenya kan biyyarraa nu hordoftanis, yoo sababaa networkiitiif carraa duraatti fayyadamuu dadhabdan, carraa 2ffaatti fayyadamuun gaafii keessan nuuf erguu mirga qabdu.
Lakkofsi kallattiin irratti bilbiltanii gaafii gaafattan 0902147777 (Hordoftoota biyya keessaa nu hordofan qofaaf)
Lakkofsi WhatsApp: +973 3545 1367
• Gaafileen sa’aa asii olitti ibsameen alatti ergame kamuu gama ulamaa’ii hin ergamu. Deebisaanis itti hin kennamu.
• Gaafii keessan eega gaafattanii booda, deebisaa ulamaa’ii argachuuf sagantaa TV Nuuralhudaa ykn YouTube Nuuralhudaa hordofuu qabdan. Deebisaan gaafii keessanii kallattiin osoo hin taane, yeroo biroo sagantaa TV irratti dhihaata.